Kacdoonka iyo Noocyada uu Uqeybsamo | KEYDMEDIA ONLINE
By Nuradin Askar - Aduunku wuxuu soomaray kacdoonno kala duwan oo qaarkood isku xigxigeen kuwakalana muddo dheer oo kala fogfog ay udhaxeysay. Sidoo kale, kacdoonaddu waa wax soonoqnoqda hadana wajiyo iyo qaabab kala duwan kuyimaadda.
Balse su’aasha isweydiinta mudani waxay tahay, maxay kacdoonnada qaarkood u-guuleystaan kuwokalana ugu fashilmaan isbedelkii laga rabay inuu keeno kacdoonkaasi? Tusaale fiican waxaan usoo qaadan karnaa Soomaaliya iyo kacdoonadii soomaray oo dhammaantood ku guuldarreystay inay xaaladdii bulshadu kakacday mid dhaanta ugu bedelaan.
• Kacdoon tacab (Agricultural revolution)
• Kacdoon aqoon (Scientific revolution)
• Kacdoon warshad (Industrial revolution)
• Kacdoon siyaasad (Political revolution)
• Kacdoon dhaqan (Cultural revolution)
• Kacdoon farsamo (Technological revolution)
Noockastoo kamid ah kacdoonaddan wuxuu ujawaabayaa culus iyo cadaadis gaar ah oo bulshadu ay dareentay. Tusaale ahaan; kacdoonkii beeraha wuxuu kadhashay hab nololeedkii ugaadsiga/dabatada oo baahidii jirtay ee bulshada dabooli waaweyay. Hadaba sidii xal waara loogu helilahaa gaajada iyo macaluusha baahday ee soonoqnoqotay oy dad badanina ku li’deen, dadku waxay ku kacdoomeen dhulka iyo beerashadiisa sidii nolol isku filnaasho wax soosaar dhanka cunnada ah loogaari lahaa. Kacdoonkii beeraha wuxuu waxweyn kabedelay hab nololeedkii bani’aadamku unoolaa wixii xiligaas kahoreeyay.
Cirbixiyeenkii reer Yurub Nicolas Copernicus buugiisii ahaa; (On the revolution of the celestial spheres) De revolutionibus orbium coelestium, 1543. Wuxuu ahaa kacdoon aqooneed oo jawaab toosa u ahaa cadaadiskii caqliga bani’aadamka lagu hayey dareenkii falcelis ee uu kabixiyay. Sida kacdoonada guuleysta lagu yaqaanno waxaa kamid ah, inuu keeno isbedel gabi ahaaneed oo kudhaca maanka iyo muuqaalka nolo maalmeedka bulshada, waana midda keentay in Copernicus buugiisa uu kacdoon kutilmaamo. Sidaasna wuxuu kunoqday aabihii kacdoonka aqoonta kadib xilligii baraaruga reer Yurub. Ballantii uuqaaday ee aheyd; ruuxii buugaas akhriyaayi inuusan mar dambe u-fikiri doonin sidii uu markaas kahor u-fikiri jiray, wuxuu kumuteystay inuu horseedo isbedel dhankasta oo bulshadii reer Yurub ah saameeyay, buugaasina ujeedadii iyo hadafkii laga lahaana uu kadhabeeyo.
Fowdadaasi waxay socotay muddo 16 sano ah, culeyskii ay keeneen dagaal oogayaashii fowdadu dhashay sannadkii 2006 waxay shacabku kuqaadeed kacdoon hubeysan, iyagoo muddo kooban kaga guuleysatay meeshana kassaaray fowdadii, cidhiidhigii iyo culeyskii dagaal-oogayaashu buslhada ku hayeen. Hasayeeshee kacdoonkaasi durbadiiba wuu fashilmay, markii koox yar oo magac diineed wadatay ay afduubtay isbedelkii shacabku u-oomanaa oy kudoonayeen nidaam iyo nabad in ay helaan. Qolyahaasi magaca diimeed soohuwaday iyagoo kubaaqayay jihaad caalami ah ayey guluf colaadeed oo quwado shisheeye iyo dowladaha dariska ahi ku lugleeyihiin dalka iyo dadka u-horseedeen. Markale ayaana dadka iyo dalka Soomaaliya uu galay burbur iyo baaba’ aan wali hore loo arkin.
Hadii aynu nidhi kacdoonku waa wax soonoqnoqda oo noocyo iyo qaabab kaladuwan udhaca, wuxuu sidoo kale astaan uyahay fashalka hogaanka jira uu kufashilmo isbedel iyo horumar bulshada in lagaadhsiiyo kahor inta culeyska haysta umadda xakamaha iyo karaarka dhaafin. Hadii aynu lanimaadno kacaan aqooneed iyo kacaan dhaqanka Soomaalida wanaagiisa lagu muujinayo iyadoo wanaagaas qawaaniin iyo xeerar qoran laga dhigayo, taasi waxay horseed unoqonkartaa in mustawe qaangaadhnimo iyo biseyl bulshada Soomaaliyeed kudhoco, kaasoo ay ku hanankarto kacdoon siyaasadeed oo guuleysta mustaqbal inay gaadho. Hadii taasi dhiciweydo, natiijadii 21 sano kacdoonadii umadda soomaray iyo sidii ay u-fashilmeen oy diinta iyo siyaasaduba dagaaladii sokeeye uga qeybqaadateen, ayey kacdoonadan 10-kii sanaba mar dhacaya iyaguna uyeelan doonaan guul isbedel keenta, kacdoon kastana dagaal sokeeye iyo fashil lagu hoobto ayuu umadda dhaxalsiindoonaa.
Qore Nuradin Askar - E-mail; nuradiin_as@yahoo.co.uk - London/UK